:Bọchị: Nọvemba 24, 2019
HKMO nyocha TCDD Campus tinyebere na Mahadum Medipol
HKMO duziri nyocha na TCDD Campus Elebara na Mahadum Medipol; Alaka HKMO Ankara, nke na-agụ akwụkwọ na TCDD Campus ekenyela Mahadum Medipol, kwupụtara na ekenyela mpaghara 50 puku square mita ka Medipol si Birgün [More ...]
Eterzọ abụọ maka Sakarya Rail System Line Kpebisiri Ike!
Uzo abuo a choputara maka sistema sisko nke Sakarya !; Mgbe ọ na-ekwu okwu na nleta ya na Obodo isi obodo Sakarya, Minister nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan kwuru, "Anyị ga-eso na-arụ ọrụ Sakarya. Sakarya kwesịrị ọrụ kacha mma [More ...]
Minister Ersoy: 'Enwere ọmụmụ banyere ụgbọ ala USB na Ndaglara Valley'
Minista Omenala na njem Njem Mehmet Nuri Ersoy: kesim Na ndị isi oche mpaghara Cappadocia, enwere otu na-ekwupụta okwu dị ka a ga-ebelata ikike nchedo mpaghara ahụ. Ihe a bu eziokwu abughi ezi .. Omenala na [More ...]
Ebepınar Bus Station Subway Tenders N’oge na-adịghị anya
Ebepınar Bus Station Subway Tenders N’oge na-adịghị anya; Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru n'okwu ya na İzmir: "Ebepınar Bus Station Metro amalitela ma a ga-eme ntinye ahụ n'oge na-adịghị anya." [More ...]
20 nke di na Sakarya n'ime akuko nke Nzuko Diploma nke International nke ndi otu ndi oru itolu na ndi otu ndi ahia (MUSIAD) guzobere TÜVASAS na ndi nochite anya obodo ahu. Igosiputa obi uto ha na nleta TÜVASAŞ [More ...]
Onye isi oche nke CHP nke Kocaeli Akar, Ndị nwe Subway Gebze Darica; Onye otu omebe iwu nke Republican na Onye Omeiwu Haydar Akar, onye isi obodo Minista ukwu nke ụzọ ụgbọ oloko ahụ pụtara na Kocaeli Peace Newspaper Sebahattin [More ...]
Onu ogugu nke ndi n’enye oru buru ibu na TCDD; Onye Minista nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Turhan kwupụtara afọ gara aga na ọnụ ọgụgụ ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka 2 puku 800 nke Kọmitii Na-ahụ Maka Ọnọdụ Akụ nke Turkey mụbara ọnụ ọgụgụ a na 3 puku 447. [More ...]
IETT Psychologists na-enyocha ndị ọkwọ ụgbọ ala
Ndị na - ahụ maka mmekọrịta mmadụ na IETT hụrụ ndị ọkwọ ụgbọ ala Metrobus; Ndị ọkwọ ụgbọ ala Metrobus na-eje ozi ndị bi na Istanbul 7 ụbọchị 24 awa nwere ndị ọbịa pụrụ iche na mpaghara ndị ọzọ. Ndị ọkà mmụta banyere mmekọrịta mmadụ na IETT batara n'ọhịa, jiri oge soro ndị ọkwọ ụgbọala na-akparịta ụka. ọkà n'akparamàgwà mmadụ, [More ...]
Taa na History 24 November 1890 concession The Haifa-Der, nke e nyere British, e rere ya na Gọọmenti Ottoman.